Power Light Version-1.4.4 Apk
ဒါကတော့ ဓါတ်မီးမရှိရင် မိမိရဲ့ ဖုန်းကို ဓါတ်မီးအဖြစ် သုံးချင်တဲ့သူများအတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ application ပါ။
ရိုးရိုး ဖုန်းမီးနဲ့ဆိုရင် အလင်းရောင်က သိပ်ပြီးတော့ မမြင်ရသလိုပါပဲ။ ခု ဒီ application နဲ့ စမ်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ မီးအလင်းရောင်နဲ့ အမှောင်ထဲမှာ ရှာချင်တာ ရှာလို့ရတာပေါ့။ ထွန်းထားလည်းပဲ ရပါတယ်။ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။ မီးပျက်တဲ့ အချိန်တွေမှာဆို ထွန်းထားရင် လင်းထိန် နေတာပါပဲ။ ကဲလိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ။နမူနာအနေနဲ့ အောက်မှာ Screen Shot တွေရိုက်ပြ ထားပါတယ်။ Android OS 2.3နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။File Size ကလည်း 6.5MB လေးပဲရှိတာမို့ လိုအပ်ရင်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒေါင်း ယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
By pyaesone - May 26, 2017 No comments:
Myanmar Unit Converter APK
The description of Myanmar Unit Converter
#credit by apkpure.com
Myanmar Driver Handbook icon Myanmar Driver Handbook APK
The description of Myanmar Driver Handbook
Advance Download manager is very popular and Nice Download Manager for android mobiles. Which allows to fast downloading internet like internet download manager does onacomputer.
ADM pro download ရယူရန်
By pyaesone - July 13, 2016 No comments:
ezPDF Reader လေးကိုသုံးကြည့်တာတော်တော်လေးလန်းတာနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
လုပ်ဆောင်ပေး နိုင်တာတွေကတော့ များစွာပါဝင်ပါတယ်ဗျာ။မိမိဖုန်း တွေပေါ်မှာ PDF ဖိုင်တွေဖတ်ဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ezPDF Reader လေးပါ Function လည်းစုံလင်ပြီးebook တွေကိုဖတ်တဲ့နေရာမှာ စာအုပ်ကိုဖတ်ရသလို တစ်ရွက်ချင်းလှန်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီကောင်လေးရဲ့ ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့17.1MB ဖြစ်ပြီး Android ဖုန်း2.1 အထက်ရှိဖုန်းများသုံးနိုင်ပါတယ်
DOWNLOAD လုပ်ရန် နှိပ်ပါ
By pyaesone - July 11, 2016 No comments:
copy from http://www.apk-mania.com/
Infinite Flight Simulator v1.2.2
မိမိတို့ Android ဖုန်းပေါ်တွင် လေယာဉ် မောင်းနှင်ချင်သူများအတွက်
Infinite Flight Simulator ဆိုတဲ့ game လေးကအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ ကျနော်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
လိုချင်တဲ့သူများ အောက်က ဒေါင်းလုပ်လင့်မှာ ကလစ် နှိပ်ပြီး ရယူနိုင်ပါတယ်..
By pyaesone - January 29, 2014 No comments:
ဒါကတော့ ဓါတ်မီးမရှိရင် မိမိရဲ့ ဖုန်းကို ဓါတ်မီးအဖြစ် သုံးချင်တဲ့သူများအတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ application ပါ။ ရိုးရိုး ဖုန်းမီးနဲ့ဆု...
Samsung Galaxy S2 GT-I9100 ကို ပထမဦးစွာ official firmware 4.1.2တင်ကြရအောင် လို့အပ်သော data များကို download ယူပါ ………………………………………………………...
Number Blocking ပါဝင်လာတဲ့ Viber v 4.2 Apk
Viber ကတော့ မိတ်ဆက်စရာမလိုအောင် အားလုံးသိရှိပြီး အသုံးပြုများတဲ့ Apkလေးပါ။ အဲဒီApkလေးကို Google play Store မှာ Update ပေးလာပြီး Versio...
Let's Create! Pottery for Android (Full Version)
အလန်းစား ဂိမ်းလို့ပဲပြောမလား အိုးပုတ်လေးတွေ လုပ်တဲ့ app လေးပါ။ စိတ်ကြိုက် အိုးလေးတွေ လုပ်ပီး လေလံတင်၊ ရလာတဲ့ ပိုက်ပိုက်နဲ့ အရောင်ေ...
Myanmar Driver Handbook icon Myanmar Driver Handbo...
The description of Myanmar Unit Converter ဤ mobile app သည် http://en.wikipedia.org/wiki/Burmese_units_of_measurement ကို အခြေခံထား၍ of...
Chat4MM v0.1 for Android
Android ဖုန်း/Tablet မှာ root လုပ်ထားစရာမလို ၊ မြန်မာဖောင့်သွင်းထားစရာမလိုဘဲ Gtalk ကို မြန်မာစာကိုဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Gtalk ဆော့ဝဲ...
Advance Download manager is very popular and Nice Download Manager for android mobiles . Which allows to fast downloading internet like in...
TubeMate v2.0.9 apk for android
android ဖုန်း များအတွက် youtube မှ movie လေးတွေကို download တဲ့အခါ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်ဆုံး ဒေါင်းနိုင်တဲ့ software ပါ.. tubemate ...
Candy Crush Saga 1.19.0 MOD APK(Unlimited Lives+Full)
Candy Crush Saga game ကို hack ပြီးသားလေး ဆော့ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Candy Crush Saga 1.19.0 MOD APK (Unlimited Live+Full ) ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ...
iPhone နားကြပ်များတွင် မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်ထားမှုဖြင့် Apple တရားစွဲခံရ
ဖုန်းမှအသံထုတ်လွှင့်မှုများကို ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် ကြားခံစနစ်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍ Intelligent Smart Phones Concepts ...
The description of Myanmar Driver Handbook ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း စံပြအမေးဖြေ နှင့် လမ်းညွှန်များ၊ လမ်းအမှတ်အသားများ ကို အတူတကွ...
mobile သတင်းများ (3)